Global Voices teny Malagasy » Mathare: Mitoraka Bilaogy Ho An’ny Fanovàna Ny Vondrom-piarahamonina Misy Azy Ny Tanora · Global Voices teny Malagasy » Print
Mathare: Mitoraka Bilaogy Ho An'ny Fanovàna Ny Vondrom-piarahamonina Misy Azy Ny Tanora
Voadika ny 25 Jona 2018 9:19 GMT 1	 · Mpanoratra RV at Kibera Nandika Lauren RAJAOBELINA
Isan'ny andiana tatitra avy amin'ny fiarahamiasan'ny Global Voices niaraka tamin'ny Map Kibera sy ny Map Mathare ‘  izay natao nandritra ny Vovonan'ny Global Voices tany Nairobi  tamin'ny Jolay 2012 ity lahatsoratra ity.
Nosoratana, notrandrahana ary sary nalain'i Ylenia Gostoli , Saffah Faroog  ary Yvonne Tiany
Ao anatin'ny fiarahamiasa eo amin'ny Global Voices sy ny fikambanana Map Kibera Trust nandritra ilay fihaonana faratampony fahadimy tany Nairobi, Kenya, dia nandeha tany Mathare, iray amin'ireo toeram-ponenana tsy ara-dalàna any ivelan'ny tanàna ny vondrona kely nahitàna mpitoraka bilaogy ao amin'ny Global Voices sy ireo mpikatroka mafana fo, mba hihaona amin'ireo olon-tsotra mpanao gazety avy amin'ny Map Mathare Project . Herintaona aty aoriana, napetraka any Mathare ilay tetikasa natomboka voalohany tamin'ny 2009 tany Kibera.
Noho ny asan'ireo tanora avy amin'iny faritra iny, dia azo natao ny namorona ny sarintany misokatra voalohany ahitàna ireo làlana any amin'ilay tanàna tsizarizary. Faritra fotsy no anehoana ireo toeram-ponenana tsy ara-dalàna tahaka itony amin'ny sarintany ôfisialy ; fa ny Map Mathare ihany koa dia mankahatra an'ireo fomba fijery mahazatra hoe toeran'ny heloka bevava sy ny tsy afa-manoatra ny tanàna tsizarizary, tahaka ireo tanora mpanao sarintany sy mpitoraka bilaogy nihaona taminay izay miasa miaraka amin'ny lahatsary ary manoratra ao amin'ny bilaoginy Voice of Mathare  ( Mathare Valley Blog  teo aloha) momba ireo olana izay mianjady amin'ny vondrom-piarahamonina misy an-dry zareo. Ezahan-ilay fikambanana ny mandanjalanja ireo tantara ratsy sy tsara, hoy ry zareo taminay, ary kendreny ny fanovàna ny fijerin'ny olona ny amin'ny fiainana any amin'ireo toeram-ponenana tsy ara-dalàna, indrindra fa manintona ny haino aman-jery mahazatra ao an-toerana sy ny iraisam-pirenena fotsiny ireo toerana tsizarizary ireo mandritra ny fotoanan'ny krizy sy ny loza mitatao amin'ny maha-olona.
Navelan'ny fiara fitateram-bahoaka teny ivelan'i Mathare, avaratra atsinanan'ny tanàna izahay. Mpanamboatra kiraro dimy na enina mifanakaiky miady mpanjifa eny amin'ny sisin-dàlana iray. Mijoro ao an-damosin'ireo ny trano fivarotana, fotaka mandrevo sy trano hazo mitafo vifotsy. Ery am-pita kosa, mitandavana manaraka ny làlana ny fako, tato aoriana vao fantatray, fa eo no arian'ireo tanora ny fako izay angoniny isa-tokantrano amin'ny karama 50 shillings isam-bolana. Ny zavatra rehetra eto dia ‘ataovy ny anao’, satria tsy raharahain'ny governemanta ny rafitra ara-pahasalamana sy ny olan'ny fako izay mahazo ny mponina efa ho 500.000 miaina ao amin'ilay toeram-ponenana.
Ny momba ireo olana ireo indrindra no tian'ny vondrona misy anay izay tarihin-dry Yvonne Tiany, Felix Okinyi ary Mike avy amin'ny Map Mathare hadihadiana. ” Amin'ny alàlan'ny firaketana an-tsaritany sy ny fitorahana bilaogy dia miezaka mitady olona maromaro izahay : mikaroka ny olana, avy eo miatrika ireo mpiray ombon'antoka mba hitadiavana vahaolana,” hoy i Yvonne. Amin'ny lafiny iray, hoy ny fanazavàny, dia napetraka manodidina ny faritr'i Mathare izay tena heverina fa tena mampatahotra amin'ny alina, indrindra fa ho an'ny vehivavy, ny jirobe manazava, taorian'ny nitondran'ny vondrona ny olana tamin'ny tompon'andraikitry ny distrikta tao an-toerana tamin'ny alàlan'ny sarintany.
Ity sary ity dia miezaka mamotopototra ny momba ny olan'ny rano, ny olan'ny fako ary ny rafitra ara-pahasalamana izay mahakasika ny fiainana andavanandro sy ny fahasalaman'ny mponina. Toerana be mponina i Mathare kanefa tsy manana fotodrafitrasa fototra ara-pidiovana, sy ny rafi-pitantanana azo antoka hitantanana ny olan'ny fako. Ny fitsangatsangananay an-togotra miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminay ao an-toerana manodidina ny tanàna no nahatonga anay nahatsapa ny halehiben'ny fomba fandraisan'ireo mponina ao Mathare an-tànana ny raharaha mba hanatsaràna ny kalitaon'ny habaka ifampizaràna sy ny loharano.
Alaina an-tsokosoko ny rano any Mathare
Tsy manana rafitra famatsiana rano ôfisialy i Mathare. Tsy tonga eto ireo fiarabe mpitondra rano madio ho an'ireo mponina manodidina, amin'ny faritra manankarena toa an'i Runda, Muthaiga, Umoja ary Langata, ka dia miankina tanteraka amin'ny fantsona mpitondra rano tsy ara-dalàna ahodin'ireo “entrepreneurs” (mpandraharaha) ao an-toerana ) mankany amin'ireo tanàna tsizarizary ny mponina. Azo angonina eny amin'fantsakàna ny rano tahaka ilay iray hita amin'ny sary, ary 1 na 2 shillings kenyana isaky ny litatra no vidiny. Na izany aza, matetika mandalo eny akaikin'ny fantsona mihanjaka izay mety ho hita manerana ilay toeram-ponenana ny famatsiana rano madio. Rehefa tsy misy rano ao Mathare, dia voatery mankany amin'ny faritra manodidina mba hitady rano amin'ny vidiny lafo ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina
Fako eny amoron-drano
Toerana fanariana fako tahaka ity iray ity no manerana an'i Mathare
Olana goavana any Mathare ny fitantànana ny fako. Matetika dia vondronà tanora voalamina no manangona ny fako, izay maka vola manodidina ny 50 shillings isa-tokantrano isam-bolana. Ariana any amin'ny toerana samihafa manodidina na ao an-tanàna ny fako voaangona. Afaka miandraikitra ny fanangonana fako ny tanora 8 ka hatramin'ny 17 taona mba hahazoana vola ho an'ny fianakaviany. Mety miady faritra sy toerana fangalàna fako ireo vondrona samihafa indraindray.
Tsy misy toerana malalaka azo antoka hilalaovan'ny ankizy any Mathare
Mandray an-tànana ny raharahany ihany koa ny ankizy rehefa mahita toerana malalaka izay azony hilalaovana any Mathare. Matetika dia hanariana fako ny toerana malalaka tsy misy trano ao amin'ilay toeram-ponenana. Indraindray dia diovin'ny ankizy ny faritra tiany hilalaovana, dorany ny fako.
Zaridaina anaty kitapo
Zaridaina an-tanàndehibe eny amoron-drano
Angamba fomba tsara hiatrehana ny vidin-tsakafo sy legioma ny zaridaina an-tanàndehibe, afaka mitahiry eo ho eo amin'ny 100 shillings isanandro ireo fianakaviana. Na izany aza, faritra be olona ny any amin'ny tanàna tsizarizary ary tena sarotra ny mikaroka tany malalaka azo volena. Zaridaina an-tanàndehibe amoron-drano no asehon'ny sary etsy ambony, tena eo anoloan'ny fako mivangongo. Ny rano ampiasaina hanondrahana ilay zaridaina dia avy amin'ny rano maloto eo ambony, izay mandray ny rano avy amin'ny fantsona tsy misarona fanariana rano maloto manavatsava ilay toeram-ponenana. Izany no antony nanombohan'ny mponina sasany mamboly legioma manoloana ny tranony. Mampiseho sarinà kale volena anaty lasaka ny sary faharoa
Sarintany hanatsaràna ny fotodrafitrasa
Tsena be olona any Mathare
Noraketin'ny Map Mathare an-tsarintany ilay toeram-ponenana mba hanehoana porofo azo tsapain-tànana ny momba ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa any amin'ny faritra sasany, ary handrisihana ny hetsika tokony atao. Trano fivoahana iombonana no naorin'ny vondrom-piarahamonina, nampian'ny lehiben'ny distrikta, taorian'ny nampisehoan'ireo olom-pirenena mpanao gazetin'ny Map Mathare fa tsy manana toeram-pidiovana ny tsena.
Tanora ao amin'ilay vondrom-piarahamonina avokoa ireo tanora mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny Map Mathare: amin'izao fotoana izao, tanora roapolo ka hatramin'ny telopolo taona, ary vehivavy ny roa amin'ireo. Mikarakara fivorian'ny vondrom-piarahamonina ireo “mapper” (mpametraka an-tsarintany) ka amin'izany no anontanian-dry zareo ny olana mahazo ny mponina mba hahafahany mandeha sy manadihady azy ireo. Tanjona goavana sy fanamby lehibe ho an'ny Map Mathare ny fampandraisana anjara ny vondrom-piarahamonina amin'ny asa ataony. Fa manome aingam-panahy ary mendrika ny fahafoizantenan'ireo tanora ireo mba hanatsaràna ny fiainany ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/25/121408/
 fiarahamiasan'ny Global Voices : https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2012/07/07/citizen-journalism-partnership-with-map-kibera-during-gv-summit/
 Vovonan'ny Global Voices tany Nairobi: https://summit2012.globalvoicesonline.org/
 Ylenia Gostoli: https://globalvoicesonline.org/author/ylenia-gostoli/
 Map Mathare Project: http://mapmathare.com/
 Voice of Mathare: http://blog.voiceofmathare.org/
 Mathare Valley Blog: http://matharevalley.wordpress.com/